မြန်မာသံတော်ဆင့်: “ လူနည်းစု - လူများစု ” ခွဲခြားခြင်း၏အန္တရယ်
ချီးကျူးသင့်သလား - ရှုံ့ ချသင့်သလား။
ဤမေးခွန်းကိုမူ တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်ကြိုက်သလိုဖြေကြဘို့ ဖြစ်သည်။
‘ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေး’ အတွက် “လူလိမ္မာများ” လိုအပ်ပါသည်။
သို့ သော်တခါတရံတော့ “လူမိုက်အလိုရှိသည်” ဆိုသောဆိုင်းဘုတ်ဟောင်း
ကိုလည်းချောင်ထည်းမှဆွဲထုပ်၊ ဖုံသုတ်ကာအသုံးပြုဖို့ လိုအပ်လာတတ်သည်။
မလုပ်ချင်သူများက ‘ထောင်ချောက်’ ဖြစ်နိုင်တယ်ဟူသော
conspiracy theory ဟောင်းကိုဆွဲထုတ်လာလေသည်။
ဘာထောင်ချောက်လဲ - ဘယ်သူကဆင်သလဲ - ဘာကြောင့်ဆင်သလဲ။
မည်မျှချမ်းသာ၊ မည်မျှပညာတတ်၊ မည်မျှခေတ်မှီသည့်လုံခြုံရေးစံနစ်ရှိ သည့်နိုင်ငံဖြစ်နေပါစေလူယုတ်မာများကိုမတားဆီးနိုင်ပါ၊ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်တော့အလစ်အငိုက်မိခံကြရတာချည်းဖြစ်သည်။
လူ ၉၀ ကျော်ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
ထို့ အတွက်နော်ဝေအစိုးရကိုအပြစ်မဖို့ နိုင်ပါ။
ယခုသုံးသပ်ချက်သည်ရခိုင်အရေးအခင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ရခိုင်ကိစ္စအပေါ် နိုင်ငံရေးလောကသားများ၏တုန့် ပြန်ချက်ကိုနားထောင်၍
caliber တွေကို အကဲခပ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
‘လူပုကလေး’ တွေဖြစ်ကာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က“မနှင်းဖြူ” ဖြစ်လေသည်။
တရားဥပဒေအုပ်စိုးရေး (Rule of law) ကိုပင်ထပ်ပြောသွားသည်။
ထို့ နောက်သူမသည်မြန်မာမူဆလင်ခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ ဆုံရာတွင်
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပြင်အခြား (နှစ်သိမ့်) စကားတစ်ခွန်းကိုလည်းပြောခဲ့သည်။
“… ..လူများစုဆိုတာဟာလူနည်းစုအပေါ်မှာဂရုဏာထားတတ်ရမယ်။ …… … လူများစုဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့အင်အားကရှိပြီးသား၊ ကိုယ့်ရဲ့အများစုအင်အားကရှိပြီးသားမို့လို့ ပိုပြီးတော့သဘောထားကြီးနိုင်ရမယ်။ ပိုပြီးတော့ဂရုဏာတရားထားနိုင်ရမယ်။
အဲဒီတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာမရွေး၊ လူမျိုးမရွေးပြည်သူပြည်သားအားလုံး တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေတာကိုကျမမြင်ချင်တယ်။”
တရားဖြစ်လေသည်။ ညီအစ်ကို ရန်ဖြစ်ကြရာမိခင်ကြီးကအစ်ကိုဖြစ်သူအား
အ၀ှာကြီးသောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လေသည်။ ဒီကနေ့ သူမပြောသော စကားတစ်ခွန်းကိုနောက်နေ့ ကမ္ဘာသတင်းစာကြီးငယ်တို့ ကအရေးတယူ
ကျွန်ုပ်တို့ အဖို့ လျစ်လျှူရှုမထားနိုင်၊ သုံးသပ်ကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။
လူပြိန်းတစ်ဦး၏အမြင်တွင် ‘လူများစု’ (တွေ)ကအိမ်ရှင်ဖြစ်နေကြသလိုလို၊
‘လူနည်းစု’(တွေ)က ဧည့်သည်တွေ - အိမ်ငှားတွေလိုလိုဖြစ်လာနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ သည်တစ်ခါတရံ “ဒို့ တိုင်းပြည်မှာနေ-ဒို့ ထမင်းကိုစားပြီး-ဒို့ ကိုစော်ကားသည်။” ဟူသောအပြောအဆိုမျိုးသုံးစွဲတတ်ကြားကြရတတ်သည်။ ဤစကားတွင်
“ငါတို့ ကအိမ်ရှင်၊သူတို့ ကဧည့်သည်”ဟူသောဓါတ်ခံပါနေသည်။
ထို “သူတို့ ”သည်အချိန်တစ်ချိန်တွင်‘ကုလားတွေ’ဖြစ်နေပြီး၊ နောက်တစ်ချိန်တွင် ‘တရုပ်တွေ’ ဖြစ်နေတတ်သည်။ လောလောဆယ်တော့ ‘ရိုဟင်ဂျာ’ ဆိုသူတွေဖြစ်နေသည်။
[‘ကုလား’ဟူသောအသုံးအနှုံးကိုအရပ်သားပြော colloquial term အဖြစ်သုံးထားသည်။
Negative connotations မပါ-ပါ။ ]
(state and citizens) ဟူ၍သာပိုင်းခြား၍သတ်မှတ်ရပါမည်။
နိုင်ငံသားထု (citizenry) ကိုထပ်၍မခွဲစိပ်သင့်တော့ပါ
သို့ မှသာဥပဒေ၏ရှေ့ မှောက်တွင်အားလုံးတန်းတူကြမှာဖြစ်ပါသည်။ (equal before the law)။
အားလုံးတတန်းတည်းထားမှသာဥပဒေကအုပ်စိုးနိုင်ပါလိမ့်မည်။(Rule of law)
မြန်မာမူဆလင်များကိုမေးကြည့်ပါ။ သူတို့ ကိုလူနည်းစုအဖြစ်သတ်မှတ်၍ (ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ)လူများစုထက်ပို၍အထူးအခွင့်အရေးပေးစေချင်သလား။
သို့ မဟုတ်ဗမာနှင့်ကျန်လူမျိုးတွေအားလုံးနည်းတူနိုင်ငံသားများ (citizens) အဖြစ်တတန်းတည်းထားသတ်မှတ်၍အခွင့်အရေးတန်းတူပဲလိုချင်သလား။
ဦးရာဇတ်ကမလိုချင်ပါ။ ဗမာတွေနဲ့ တန်းတူရည်တူနိုင်ငံသားတွေအဖြစ်နှင့်
[ဦးရာဇတ်အမြော်အမြင်ကြီးပါပေသည်။ သူသာဂျင်းနား (Ali Jinner) လို မူဆလင်ပြည်နယ်တစ်ခုသတ်သတ်ယူခဲ့လျှင်မြန်မာမူဆလင်တွေသည် - အိန္ဒိယလွပ်လပ်ရေးယူစဉ်တုံးကပါကစ္စတန်ဘက်ပြောင်းကြရသလိုပြောင်း
ရွှေ့ ပေးရပြီးကနေ့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောလိုနေရာမျိုးလောက်မှာ
မြန်မာမူဆလင်တွေဟာလက်တွေ့ မှာလူဦးရေအရဗမာ(ဗုဒ္ဓဘာသာ)တွေ ထက်လူဦးရေနည်းမနေဘူးလား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတာမမှားဘူး
ကျနော့်အမြင်တွင်သူမ မမှားသလို မှန်လည်းမမှန်ဘူးဟုသာပြောလိုသည်။
(relative minority) နှင့် ပကတိလူနည်းစု (absolute minority) ဟူ၍ထပ်
ခွဲခြားနိုင်သည်။ လူဦးရေ ၅၆ သန်းခန့် (အစိုးရစာရင်း) ရှိသောမြန်မာပြည်
တွင်မြန်မာမူဆလင် (မြန်မာမူဆလင်မိတ်ဆွေရင်းတစ်ဦး၏ခန့် မှန်းချက်အရ
တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ ကျန်လူများနှင့်ရောနှောနေ သောကြောင့်၊သီးသန့် 
(ဥပမာ ကချင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ၀၊ တရုပ်၊ ဟိန္ဒူ) တို့ ထက်လည်းလူဦးရေပိုများသည်။ ထို့ ကြောင့်မြန်မာမူဆလင်များသည်(ဗမာများနှင့်သာ)နှိုင်းရသဘောအရလူနည်းစုဖြစ်ကြသည်။
တကယ့်ပကတိသဘော(in absolute term) အရတော့လူနည်းစုမဟုတ်။
ထို့ ကြောင့်မြန်မာမူဆလင်များကိုယ်တိုင်ထံမှသူတို့ ကိုယ်သူတို့ 
ယုံဖြင့်မမြင်ရသောလူများစု (invisible majority)တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ခွဲခြားခြင်းသည်နယ်ချဲ့ သမား၏အင်ပါယာစံနစ် (imperialism)
တွင်မြစ်ဖျားခံနေသည်ကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မည်။ (Ref: Wikipedia)
ရောမအင်ပါယာရှင်ဆီဇာခေတ်၊ ထို့ နောက်ပြင်သစ်ဧကရာဇ်နပိုလီယံ တို့ မှစ၍နောက်ပိုင်းဗြိတိသျှအင်ပါယာတည်ဆောက်သူများအထိ
ဤသည်ကိုခွဲခြား၍အုပ်စိုးခြင်း (divide and rule) ဟူ၍လည်းသိကြသည်။
ခေတ်မှီအုပ်ချုပ်ရေးပညာ၊ စစ်ပညာများလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခံရ၍၄င်းတို့ 
ကိုလက်ကိုင်ပြု (proxy) ကာ - လူများစုများကိုအုပ်စိုးလေသည်။
ထို့ ကြောင့် လူနည်းစု/လူများစုခွဲခြားခြင်းသည်အုပ်စိုးသူ၏အလုပ်ဖြစ်သည်။
(absolute minority) စစ်စစ် တစ်ခုကိုအုပ်စိုးသူကမရွေးချယ်ပါ။ အကြောင်း မှာတကယ့်ပကတိလူနည်းစုတစ်ခုသည်လူဦးရေအလွန်နည်းလွန်းနေ
ကိုလိုနီခေတ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဗမာလူများစုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရှမ်းများ၊ မွန်များ၊ ရခိုင်များသည်လည်းလူနည်းစုများပင်ဖြစ်သော်လည်းသူတို့ သည်ဗမာများနှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာချင်းတူနေသဖြင့်ဘာသာရေးအရလူနည်းစု
(religious minority) မဟုတ်ကြ။
ထို့ ကြောင့်ဗမာမဟုတ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်သောအခြား“လူနည်းစု” တစ်ခုကိုသာရွေး၍လက်စွဲပြုသွားသည်ကိုတွေ့ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ ကြောင့်လူနည်းစု (minority) ဆိုသည်မှာနယ်ချဲ့ သမားကသူ
အသုံးချရန်တီထွင်ခဲ့သောနိုင်ငံရေးထွင်လုံး (political construct)
(Rawanda) တွင်ဟူတူ(Hutu)လူများစုကဘယ်လ်ဂျီယံနယ်ချဲ့ သမား
ကမြှောက်စား၍အသုံးချခံရသောတွတ်ဆီ (Tutsi) လူနည်းစုဝင်
[အကယ်၍သာထိုအချိန်က (၁၉၄၇) ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟူ၍ခွဲမထွက်ခဲ့လျှင်
အကြောင်းမရှိ။ ထိုသို့ ဆိုလျှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဧရိယာသည်ယခုထက်
အများကြီးပိုကျယ်ဝန်းနေမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ လည်းခိုးဝင်လာမည့်
ထို့ ကြောင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်းရှိနိုင်ငံသားများကိုလူနည်းစု/လူများစုဟူ၍ ထပ်မံခွဲခြားသည့်နယ်ချဲ့ စံနစ်၏လက်ကျန်အလေ့အကျင့်တစ်ခုကိုမသိသား
ဤခွဲခြားမှုကြောင့်ကောင်းဖို့ ထက်ဆိုးဖို့ ကပိုများပါသည်။
‘လူနည်းစု-လူများစု’ခွဲခြားပြမှုကြောင့်နိုင်ငံသားများ (citizens) သည်မိမိတို့ 
ကိုယ်ကိုလူနည်းစုဝင်လော - လူများစုဝင်လောဆန်းစစ်၍အုပ်စုတစ်ခုခု
အသားလွတ် - အကြောင်းမဲ့ - မောက်မာလာစေသည်။
- လူများစုထည်းကသာမန်လူများကိုမူ ‘လူများစုဖြစ်နေတာနဲ့ ပဲ
- လူနည်းစုထည်းမှရမ်းကားလိုသူများကိုထာဝစဉ်တပ်လှန့် ပေး
ထားရာကျသည်။တစ်ချို့ ကိုစစ်သွေးကြသူများ(militants) ဖြစ်လာစေသည်။
ပြဿနာကိုလိုတာထက်ပို၍တုန့် ပြန်စေသည် (over-reaction)
(ဥပမာ ကိုမြအေးပြောသော ‘ထောင်ချောက်’)
- လူနည်းစုထည်းမှသာမန်လူများကိုထာဝစဉ်ထိပ်လန့် နေစေသည်။
အားကိုးရာအဖြစ်နိုင်ငံတော်အစိုးရ(law and order enforcement agencies)ကိုအားကိုးသူနှင့်အစွန်းရောက်များကိုအားကိုးမိသူ
ဟူ၍နှစ်ပိုင်းကွဲထွက်သွားစေသည်။ (အစွန်းရောက်သူများမိမိတို့ ၏
သွေးသားထည်းမှာရှိလျှင်) သူတို့ ၏ခံစားချက်များ(ဒုက္ခများ)ကို
- တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သူအစိုးရအနေဖြင့် “လူနည်းစု-လူများစု”
အစွဲ (prejudice) ၀င်နေပြီးသားလူထုကိုအုပ်ချုပ်ရအလွန်ခက်သည်။
(when its legitimacy in power is questionable) နေရလျှင်ပို၍ခက်သည်။
စကားနောက်ကစေတနာကိုသိပါသည်။ သို့ သော်ထိုစကားသည်နိုင်ငံရေး
သူတို့ သည်အခြားသူများနည်းတူ“နိုင်ငံသားများ”(citizens)သာဖြစ်ကြပါသည်။ အခြားသူများထက်ဘာအခွင့်အရေးမှလည်းပို/လျှော့ယူချင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အထူးသဖြင့် “လူနည်းစု” အဖြစ်သတ်မှတ်ခံ၍ “လူများစု”၏
(second class citizens) ဖြစ်ကုန်ကြလိမ့်မည်။
ထို့ ကြောင့်သူတို့ ကို “လူနည်းစု”ဟုသတ်မှတ်၍ဆက်ဆံခြင်းကို
နိုင်ငံရေးတွင်လူနည်းစုအခွင့်အရေးများ (minority rights)
(Tyranny of majority) မဖြစ်အောင်အထူးကိစ္စအနည်းငယ်
သို့ သော်ချွင်းချက်သာဖြစ်၍ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီမိုကရေစီ၏
တရားကိုယ်ဖြစ်သော “အများစုဆန္ဒအတည်” (majority rule)
မြန်မာစကားတွင် “ဆင်သွားရင်လမ်းဖြစ်သည်”ဟူသောစကားတစ်ခွန်းရှိသည်။ သို့ သော်ဆင်ကန်းတောတိုးသလိုသွားသည့်နောက်ကိုလိုက်လို့ လည်းမဖြစ်။
‘ရန်ဘက်’အနေအထားမှာ "တည်" ထားပေးလိုက်သလိုဖြစ်နေသည်။
ဖြစ်သင့်သည်မှာလူမျိုး၊ ဘာသာကိုးကွယ်မှု လူဦးရေစသည့်သတ်မှတ်ချက်တွေမရှိ၊ လူတိုင်းကိုအားလုံးတန်းတူနိုင်ငံသား(citizens) တွေချည်းအဖြစ်ရှုမြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီသည်လွပ်လပ်မှု၊ တသီးပုဂ္ဂလ၀ါဒနှင့်အကန့် သတ်ခံအစိုးရ
(Liberty, individualism and limited government) ဆိုသည့်ဒေါက်
အားထုတ်နေသူအောက်လွှတ်တော်အမတ်ရွန်ပေါလ် (Ron Paul - Rep./Texas) ကပြောသည်။
(ကျွန်ုပ်တို့ ခေတ်၏ဓည၀တီအရေးတော်ပုံ) သည်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေ
ကိုရှေ့ ခရီးအတွက်အရည်အချင်းစစ် ‘ပထမအစမ်း - စာမေးပွဲ’လိုဖြစ်နေသည်။
အာဏာရှင်ခေတ်တလျှောက်အစိုးရဆန့် ကျင်ရေးနိုင်ငံရေးတစ်မျိုးတည်း ကိုလုပ်တတ်ရုံဖြင့်နေရာရခဲ့သောသူများသည်ရှေ့ တွင်လာမည့်အမျိုး
ယခုအခါ နိုင်ငံရေးသမားများအနောက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများသို့ နိုင်ငံရေးလေ့
သို့ သော်မိမိတို့ မှာ“ဓါတ်ခံကောင်း”ရှိပြီးသားဖြစ်နေဘို့ တော့လိုမည်။
သို့ မဟုတ်လျှင်ပြည်ပကိုအထင်ကြီး၊ ပြည်ပကညွှန်ကြားချက်တွေကို
လတ်တလောရခိုင်ကိစ္စကဲ့သို့ ပူပူနွေးနွေးလည်းဖြစ်၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိစ္စ
(national security issue) ကကျန်ကိစ္စများကိုကျော်လွှားတက်လာသောအခါ မျိုးတွင်ဘက်လိုက်သောရပ်တည်ချက်များ၊ မေးခွန်းများနှင့်ရင်ဆိုင်ရဘို့ ရှိသည်။
Burma Campaign UKလိုအဖွဲ့ မျိုးတွေနှင့်ရိုဟင်ဂျာဆန့် ကျင်ရေး
အစမ်းစာမေးပွဲဖြစ်ပေမည့် “မနှင်းဖြူ” အတွက်မူ စာမေးပွဲကြီးဖြစ်နိုင်သည်။
Posted by Myint Shwe at 12:49 PM
Thet June 10, 2012 at 7:38 PM
ကောင်းလုိုက်တဲ့ ဆောင်းပါး။ ရေးသူနာမည်ကုို သိလုိုပါသည်။
Anonymous June 11, 2012 at 1:11 AM
သိပ်ကောင်းတယ်ဗျာ။ ဒီလို နိုင်ငံရေးအမြင်ရှိတဲ့သူတွေ များများလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို အချက်အလက်မျိုးနဲ့ အရေးအသားမျိုးနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ထိန်းကျောင်းတည့်မတ်ပေးနိုင်သော လူတော်လူကောင်းများစွာ ပေါ်ထွန်းလာစေဖို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်။ Share လုပ်ထားပါတယ်။ စာရေးသူကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
awesome!!!! we really need like this article....thnx4sharing...
There is no Rohingya in Myanmar and Bangladesh history. Bangladesh government and muslims named Muslims in Rakhine state to become Myanmar Ethnic . Bangladesh Government want Myanmar to become Muslim country if they don’t accept illegal 700,000 Bangladesh Rohingya muslims and illegal 700000 Rohingys live in Rakhine state and Myanmar. These rohingya s in Myanmar are real Bangladesh muslims. Bangladesh muslims invaded and insult Myanmar. They are liars .Myanmar President U Thein Sein and NLD party leader Aung San Su Kyi must do step by step .
( 1) Must do Press conference and clearly tell all Myanmar people and UK, USA and World governments and world media that Rohingya is not Myanmar ethnic and Myanmar Nationality forever . There is no Rohingya in Myanmar and Bangladesh history. Bangladesh government and muslims named Muslims in Rakhine state to become Myanmar Ethnic. They are liars . There isastatement that Rohingya is not Myanmar ethnic in Myanmar Constitution. There must be have Muslim (Islam) control laws ( ban muslims immigrants, ban Mosque and muslim schools and Islamic centers , 1 muslim for 1 wives and 1 muslim kid ) in Myanmar Constitution . If so, Rohingya and World can't colonize Rakhine state and Myanmar.
(2) Current Myanmar President U Thein Sein and NLD leader Aung San Su Kyi issue leagal statement that Rohingya is not Myanmar Ethnic and Myanmar Nationality.
(3) Then deport all 700,000 Rohingya Muslims who don’t have National ID or have ID ( because Rrohingya bribealot of money to immigration officers in Myanmar Bangladesh border ) and Muslims from Rakhine state and Myanmar. Arrest and fine Myanmar immigration officers and hospitals who took bribe from Bangladesh muslims and issue Myanmar birth certificates and National ID to illegal Bangladesh muslims.
(4 ) Then Establish good economy in Northern Rakhine state ( Bangladesh -Myanmar border ) and organize millions of Myanmar migrate to Northern Rakhine and Rakhine state. If so Myanmar and Rakhine people will be majority in Northern Rakhine and Rakhine state.
World Rohingya , Saudi Arabia Government and Other Muslim country governments and World muslims bribe , lobby and give millions of money to BBC, British Government ( One of Current UK cabinet is Muslim ) and VOA and World media , UN, NGO who support Rohingya. So Myanmar government and opposition leaders and all Myanmar in World protest them. Arrest Pro Rohingya muslim , Myanmar muslims in UN, UNHCR, NGO in Myanmar.
All Rakhine and Myanmar people must protest in front of Bangladesh Embassy, Saudi Arabia Embassy, British Embassy , British Consulate , and other pro Rhohingya and pro muslim country Embassies and Consulates in Myanmar about Rohingya.
Myo Myanmar June 15, 2012 at 5:19 AM
ဖတ်လို့တော်တော် ကောင်းပါတယ်
IQ တော်တော်မြင့်ပြီး EQ သာမာန်အောက် အဆင့်သာ ရှိတဲ့သူ တစ်ယောက်ရေးထားတာပါ။
ဖတ်လို့ ကောင်း ဗဟုသုတရပေမယ့် အကျိုးမရှိတဲ့ စာပါ။
တိုင်းပြည်အတွက်ဘာ စေတနာမှ မပါပါဘူး
လုံးဝ Nothing ပါဘဲ။
အဲသည်လို ဥာဏ်ရည်ကောင်းပြီး မျိုးချစ်စိတ်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာကတော့ ပူတာအိုထောင်ထဲမှာ A Class နဲ့ နှစ် (၂၀)လောက်ထည့်ထားဖို့ ပါဘဲ။
"အဲ့လို အခြေအနေမှာ အဲ့လို မပြောသင့်ဘူးဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောသင့်သလဲ"ဆိုတာ စဉ်းစားသွားတယ်။ အကယ်၍ အဲ့လို မဖျောင်းဖျပေးခဲ့ဘူးဆိုရင် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မြန်မာ မွတ်ဆလင် အချင်းချင်း ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ဖို့ တွန်းအားပေးတာမျိုး ပြောရမှာလား @-@"
အောင်မြင့် June 19, 2012 at 2:36 AM
ရေးတာ ဟုတ်မလိုနဲပ ပွဲဆူအောင်လုပ်တဲ့ စာပါ။
ကိုလိုနီ သွေးတွေ စုကြည်ထဲ စိမ့်ဝင်နေတယ် ဆိုတာ အခုမပဲ သဘောပေါက်တော့တယ်။
ကိုလိုနီ သွေးတွေ စုကြည်ထဲ စိမ့်ဝင်နေတယ် ဆိုတာ အခုမပဲ သဘောပေါက်တော့တယ်?? you are really right fri:)